कति बालबालिका विद्यालयबाहिर ? - Karobar National Economic Daily
कति बालबालिका विद्यालयबाहिर ?
query_builderSeptember 26, 2017 7:26 AM supervisor_accountडा. माधव अधिकारी visibility362
नेपालले बालकालिकाहरूलाई शिक्षामा अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसरी गरिएका सन्धि, सम्झौता र घोषणापत्रबाट राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा नीति र कार्यक्रममै सकारात्मक दबाब सिर्जना पनि गरिएको छ ।
अहिले बालबालिका, अन्धा, अपाङ्ग, शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित सबैका लागि शिक्षा केही प्रभावकारी भएको हो कि भन्ने छ । तर, दुर्गम स्थानमा शिक्षाको प्रभावकारितामा धेरै चुनौतीहरू विद्यमान छन् । सरकारले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भने पनि धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर हुनु र विद्यालय गएकामध्ये धेरैले बीचैमा पढाइ छाड्नु नेपालको शिक्षा नीतिको असफलता हो भन्न सकिन्छ । प्रशस्त लगानी भए पनि अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन सकेको छैन ।
सबै बालबालिकालाई प्राथमिक स्तरसम्मको शिक्षा गुणस्तरीय र निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन नेपालले प्रतिबद्धता जनाइसकेको सन्दर्भमा अझै पनि बालबालिकाहरू विद्यालयबाहिर छन् । शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) र राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संघ (युनेस्को) ले तयार गरेको गत वर्षको विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकासम्बन्धी नेपाल अध्ययन प्रतिवेदनले ५ देखि १२ वर्षका ७ लाख ७० हजार २ सय ८८ बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । सो उमेर समूहका ५३ लाख ७४ हजार २ सय ६३ बालबालिका छन् र सो संख्याको १४.३ प्रतिशत विद्यालयबाहिर छन् ।
प्राथमिक उमेर समूहका २ लाख ८० हजार ३ सय ६६ बालक तथा २ लाख ९४ हजार ८१ बालिका र निम्न माध्यमिक उमेर समूहका ८५ हजार ९ सय ६ बालक तथा १ लाख ८ हजार ९ सय ६५ बालिका विद्यालयबाहिर रहेको देखाएको छ । यसबाट विद्यालयबाहिर रहेका बालकभन्दा बालिकाको संख्या बढी रहेको प्रस्ट हुन्छ । गरिबी, विद्यालय अनुकूल हुन नसक्दा, सामाजिक परिस्थिति, अपांगतालगायतका कारण ती बालबालिका विद्यालयबाहिर रहन पुगेको सम्बन्धित मन्त्रालयको दाबी छ । मुस्लिम समुदायका बालबालिका सबैभन्दा बढी १ लाख १० हजार १ सय २८ विद्यार्थीबाहिर छन् ।
जातीयताका आधारमा क्षेत्रीका बालबालिका सबैभन्दा बढी विद्यालयबाहिर छन् । नेपाल अध्ययन प्रतिवेदनले क्षेत्रीका ७५ हजार २ सय १७ बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर रहेको देखाएको छ । विद्यालयबाहिर कामीका ३४ हजार ४ सय ४९, मगरका ३४ हजार ३ सय २१, मुसहरका २९ हजार ७ सय ६४, तामाङका ३८ हजार ४ सय २०, यादवका ५५ हजार ३ सय ७९, थारुका २९ हजार ८ सय, दुसाधका १७ हजार ८ सय ३५, चमारका २६ हजार १ सय १७, ब्राह्मण (पहाडी) का २४ हजार ३ सय ७२ बालबालिका छन् । विद्यालयबाहिर कुसुन्डाका ५, नुरुङका ५, लोहारुङका १२, साङ्पाङका २८, किसानका २२, ल्होपाका ३९, ल्होमीका ५७, कलारका ५२, जिरेलका ४८, अन्य जातजातिका ३५, राउटेका ५६, थकालीका ८५, वलुङका ३० बालबालिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिशतका आधारमा डोमका सबैभन्दा बढी ५८.४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । डोमका ५ देखि १२ वर्ष उमेरका ३ हजार २ सय ९९ बालबालिकामध्ये १ हजार ९ सय २५ जना विद्यालयबाहिर छन् । त्यस्तै प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा कम आठपहरिया बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । सो जातिका १ हजार ७० बालबालिका रहेकामा ४६ जना मात्र विद्यालयबाहिर छन् ।
प्रतिवेदनले हरेक ५ मध्ये १ बालबालिका अझै पूर्वप्राथमिक उमेरको २२ प्रतिशत हुन आउँछ । हिमाली क्षेत्रमा ४ वर्ष उमेर नाघेका २४.३ प्रतिशत बालबालिका पूर्वप्राथमिक वा प्राथमिक तहमा अझै भर्ना भएका छैनन् । प्रतिवेदनअनुसार प्राथमिक तहमा भर्ना भएकामध्ये ८६.८ प्रतिशत मात्र कक्षा ५ मा पुग्ने गरेका छन् र तीन चौथाइ अर्थात् ७४.६ प्रतिशत मात्र कक्षा ८ सम्म पुग्ने गरेका छन् । माथिको तथ्यांकअनुसार शिक्षामा लगानीको दृष्टिकोणमा सन्तोष मान्ने अवस्था ज्यादै कम छ ।
शिक्षा विद्यालय बालबालिका शिक्षा नीति